Caliber Inotakurika yeMac: Kugarisana uye Kushanda | MaReaders ese
Caliber Inotakurika: Inoenderana neMac? Chinoshanda sei?
Eder Esteban | | Caliber, Software
Caliber Portable nderimwe remazita ayo vashandisi vazhinji vane eReader vanoziva kana vanoziva.. Uye nechikonzero chakanaka, sezvo chiri chimwe chezvirongwa zvinonyanya kukosha zvatingawana nhasi. Saka zviri nyore kuti isu tizive zvishoma zvishoma nezve software iyi.
Isu tichangobva kukuudza zvishoma nezvenhoroondo uye mashandiro eCaliber Portable. Chirongwa chinonyanya kubatsira uye chinonyanya kunakidza. Vhura Iyi link Iwe unogona kuwana zvakawanda nezve izvo zvatakakuudza kare. Nhasi, isu tinokuudza zvimwe nezve chirongwa uye mashandiro ainoita Mac.
Tichatanga kukuudza zvishoma nezve izvo Caliber Portable inogona kukuitira. Saka iwe unowana zano nezve chirongwa ichi. Gare gare isu tinokuudza iwe zvishoma nezve kuenderana kwayo neMac makomputa uye kuti chirongwa chinoshanda sei pavari.
1 Chii chinonzi Caliber Chinotakurika?
2 Caliber Inotakurika inoenderana neMac?
3 Caliber Portable inoshanda sei paMac yako?
4 Caliber Inotakurika yakakosha here?
Chii chinonzi Caliber Chinotakurika?
Iyo software yatingaite nayo zvinhu zvinoverengeka panguva imwe chete. Kune rimwe divi, iyo sarudzo yakanaka yekuronga ese eBooks yatinayo. Sezvo zvinotibvumidza isu kuzvironga nenzira yakapusa zvichibva pane dzakawanda maitiro. Tinogona kuzvironga zvinoenderana nemusoro wadzo, munyori, ISBN, gore rekuburitsa, muparidzi ... Muchidimbu, isu tine huwandu hwakawanda hwezvinogona kushandiswa. Saka isu tichava neese eBooks mune yedu yekuunganidza yakarongeka zvakanaka. Yakanaka kana isu tine akawanda, nekuti nenzira iyoyo zvichave nyore kwatiri kuti tivawane.
Kune rumwe rutivi, Caliber Portable inotibvumidzawo kushandura mafomati. Tinogona kushandura mafaera pakati pemafomati akasiyana, kunyanya pakati pemafomu akajairika eBook. Saka tinogona kushanda nePDF, ePub, MOBI, txt uye zvimwe zvakawanda. Nekudaro, isu tinokwanisa kugadzira mafaira mune fomati inogamuchirwa nemuverengi webhuku redu nenzira yakapusa. Kubva pane izvo isu zvatinoona chakakura chiwanikwa icho chirongwa ichi chine.
Caliber Inotakurika inoenderana neMac?
Imwe yemabhenefiti makuru echirongwa ichi ndeyekuti inoenderana neese masisitimu anoshanda. Ndicho chinoita kuti chive chakakurumbira sarudzo pasirese. Izvi zvinosanganisira Mac, se chirongwa chakatangwa uye chinowanikwa kuMac OS. Saka vashandisi vane Apple komputa vanogona kurodha pasi iyi software.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuishandisa pane mamwe maApple madivayiri senge iyo iPad kana iPhone. Saka kana iwe ukashandisa iyo iPad seReader yako, unogona kurodha pasi chirongwa uye kuronga nenzira iyi zvese zvawakachengeta pane mudziyo. Zvimwe chete nefoni. Izvo zvinokwanisika kurodha pasi Caliber Inotakurika pane chishandiso chako chaunosarudza, sezvo ichizoshanda.
Pamusoro pekuwanikwa kweMac, chirongwa ichi chinowedzeredzwa kazhinji. Saka isu tinogara tichive nezvazvino zvidziviriro zvekuchengetedza zviripo, pamwe nezvinhu zvitsva kana kunatsiridzwa kunounzwa. Nekudaro, isu hatipotse chero chinhu icho Caliber inofanira kutipa kwatiri.
Kune avo vanofarira kurodha pasi chirongwa ichi, Ivo vanogona kuzviita kubva kuCaliber yavo webhusaiti. Mariri isu tinogara tine yazvino vhezheni yesoftware inowanikwa. Saka hatifanirwe kutsvaga zvakanyanya. Kana iwe uchida kurodha pasi Caliber Inotakurika pane yako Mac, unogona kuzviita kubva pane izvi link. Pane zvese zvaunofanirwa kuita ndizvo Sarudza vhezheni ye macOS.
Caliber Portable inoshanda sei paMac yako?
Kana tango tora pasi, tinofanirwa kutevera maitiro ekumisikidza. Isu sevashandisi hatifanirwe kuita chero chinhu, Ingosarudza mumutauro watinoda kushandisa chirongwa ichi uye nenzvimbo iyo ichachengetwa. Tevere tinosarudza mhando yeReader yatinayo mune rondedzero yemhando dzatinowana. Ivo vanotibvunza isu chiratidzo uye mhando yechigadzirwa. Kana izvi zvasarudzwa isu tagadzirira. Caliber Portable yakatove yakaiswa pane yedu Mac. Tinogona kutanga kuishandisa izvozvi.
Chirongwa ichi chinotibvumidza isu kuwedzera mabhuku atinawo muunganidzwa wedu. Zvingangodaro, inozozviona zvoga. Saka patinotanga kuishandisa, mabhuku atakachengeta pascreen achabuda. Ivo vese vakagadzirira kuronga, mukuwedzera, tinogona kuwedzera mabhuku nekusarudza bhatani rebhuku rekuwedzera rinoonekwa kumusoro.
Kurongeka kwema eBooks kuri nyore, sezvo tichigona kuzvironga zvinoenderana nematanho atinoda. Nenzira iyo yakanyanya kugadzikana kwatiri. Rimwe remabasa anotibvumirwa nechirongwa nderekutumira maEbook kuReader yedu. Ingosarudza iyo eBook iri mubvunzo uye tinya pane bhatani rinowanikwa kumusoro kutumira kuReader.
Zvakare, nekushandisa iri basa, Caliber Inotakurika pachayo ichave iri pamusoro pekushandura iyo eBook kune chaiyo fomati inoshandiswa neyedu kifaa. Muchokwadi, isu tinowana bhokisi rekuyambira iro rinotibvunza isu kana tichida kuti riite nguva dzese shanduko iyi otomatiki. Naizvozvo, isu sevashandisi hatifanirwe kudaro. Iyo purogiramu pachayo ichave inoona nezve kushandura iyo faira otomatiki kuti tikwanise kuiverenga muBook yedu.
Kunyange zvakadaro chirongwa icho pachacho chinotipawo sarudzo yekushandura pakati pemafomati. Muchikamu chepamusoro chepamusoro chebharaki rebasa tine sarudzo iyi. Ikoko isu tinokwanisa kusarudza yekuisa uye yekubuda fomati uye nekushandura iyo faira nenzira yakapusa. Inogona kuve sarudzo yakanaka kana tikashanda nemidziyo inopfuura imwe. Chii chimwe, isu tine nhamba huru yemafomati anowanikwa kuitira kuita shanduko yakati.
Caliber Inotakurika yakakosha here?
Vazhinji venyu vangatoziva chirongwa ichi. Chokwadi ndechekuti chakakwanisa kuwana chinhanho mumusika, zvakanyanya nekuda kwekuita kwakawanda. Sezvo iri sarudzo inosununguka uye inotipa akati wandei akakosha mabasa. Kune rimwe divi, tinogona kuronga raibhurari yedu nerunyararo rwakazara uye zvichibva pamatemu atinoda. Saka tinosarudza zvakatinakira.
Kune rimwe divi, iyo inotibvumidza isu kushandura pakati penzira dzakasiyana siyana. Saka zvinotipa rusununguko rwakawanda kana zvasvika pakushanda.
Saka pasina kupokana Caliber Inotakurika isarudzo yakanaka kurodha pane yako Mac. Uye zvakare, isu tine chokwadi chekuti inowirirana neMacOS uye nezvimwe zvishandiso senge iyo iPad. Saka iwe uchave unokwanisa kuishandisa neyako ese Apple zvigadzirwa. Usazeze kurodha pasi, hauzombozvidemba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Software » Caliber » Caliber Inotakurika: Inoenderana neMac? Chinoshanda sei?
Caliber muenzaniso wakanaka weiyo software yemahara inogona kuita. Ini handizive chirongwa chiri nani uye chakakwana kugadzirisa raibhurari.
Muchikamu chino ndinofunga pane izwi rinogona kukonzera nyonganiso: Zita chairo rechirongwa ndi "CALIBER", uye musoro waro uri "ebook manejimendi". Izvo zvinogona kutorwa pa:
Windows Vista, 7, 8 uye 10 (32 mabits) pane rakaomarara dhisiki uye sarudzo mune «Inotakurika» vhezheni (muPenDrive kana imwe mhando yekunze ndangariro)
Windows Vista, 7, 8 uye 10 (64 ikakuruma)
Linux (kumisikidzwa kumwechete kwemakumi matatu nematanhatu nematanhatu)
macOS 10.9 (Mavericks) kuenderera mberi.
Ini ndakazviongorora paWindows 7 uye inotakurika, pamwe neLinux (pasi peUbuntu).
Chirongwa ichi chinowanzo kuve neanopfuura kamwechete ekuvandudza pamwedzi, uye kana iwe uchifunga kuti YAKANAKA yakakwana, vanouya voigadziridza.
Kuongorora kweMagetsi eReader Max
Chii chichava maReaders achaonekwa mukati megore ra2018?